निर्वाचन परिणामले देउवालाई राहत - Jhilko
निर्वाचन परिणामले देउवालाई राहत
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीभित्रबाट सङ्कटमा पर्दै गएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपनिर्वाचनको मत परिणामले केही राहत दिएको छ । उपनिर्वाचन भएका ५२ स्थानमा यसअघि नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो तर यसपटक ४० प्रतिशत पु¥याएको छ । खासगरी धरान र भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेसले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । भक्तपुर र धरानमा नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा भन्दा ४० प्रतिशत बढी मत प्राप्त गरेको छ ।
कास्की, बाग्लुङ र दाङमा पनि नेपाली कांग्रेसका मत घटेका छैनन् । तर, नेकपाको ४७ प्रतिशत मत कायमै रहेका कारण देउवालाई जस दिन नेपाली कांग्रेसको इतर पक्ष तयार छैन । मुलुक दुई पार्टीय प्रणालीमा गएका कारण ४५ प्रतिशत जनमत नपु¥याई नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने सपना देख्न नहुने कांग्रेस निकट विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
मुलुक उपनिर्वाचनमा होमिएका कारण विगत एक महिनादेखि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामला मत्थर भएको थियो । आन्तरिक मामिलालाई स्थगित गर्दै नेताहरु उपनिर्वाचनमा होमिएका थिए । उप निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिला फेरि बल्झिने सम्भावना देखिएको छ । मंसीर महिनाभित्र वडा समिति, पालिका समिति, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, प्रदेश कार्य समिति अन्तरिम रुपमा गठन गरी सक्ने र फागुन मसान्तभित्र स्थानीय अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको थियो । मंसीर मसान्तभित्र वडा समिति, पालिका समिति, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, प्रदेश कार्य समिति अन्तरिम रुपमा गठन गरी नसके फागुन मसान्तभित्र स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था छ ।
फागुन मसान्तभित्र स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न हुन नसके थपिने एक वर्षभित्र १४ औं महाधिबेशनका लागि समय पुग्ने अवस्था छैन । वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तभित्र सकिँदै छ । त्यसपछि विधानले दिएको बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने अधिकारको प्रयोग गर्दै एक वर्ष म्याद थप्ने सहमति भइसकेको छ । तर, थपिएको एक वर्षको म्यादभित्र महाधिबेशन सम्पन्न हुन सम्भव छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न मुख्य रुपमा अघि आएको छ । तर, कांग्रेसको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा थपिएको एक वर्षभित्र पनि १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
त्यसपछि के हुन्छ ? भन्नेतर्फ कांग्रेसका दुवै समूहहरु आ–आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन् । विजयकुमार गच्छदारसँगको पार्टी एकीकरणको निहुँ बनाएर महाधिबेशन नै नगराई अघि बढी रहने रणनीतिमा सभापति देउवा छन् । यो रणनीतिमा उनले आफ्नो पक्षको मात्रै होइन इतर पक्षका पनि धेरै नेताहरुको साथ पाएका छन् । देउवाले यो अस्त्र प्रयोग गर्दै महाधिबेशन छले भने के गर्ने ? भन्ने रणनीतिमा इतर पक्षका नेताहरु देखिएका छन् । तर इतर पक्षभित्र पनि तीन वटा समूह छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अलगअलग गुटहरु छन् । इतर पक्ष तीन गुटमा विभाजन हुनु र यी तीन वटै गुटको दुरी बढ्दै जानुले सभापति देउवालाई आफ्नो रणनीतिमा धेरै नै सफलता मिलेको छ ।
तर, समय देउवाले सोचे अनुसार अघि बढ्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको कांग्रेसका विश्लेषकहरु बताउँछन् । पार्टीको मात्रै होइन प्रायः सबैजसो भ्रातृ संगठनहरुको पनि म्याद सकिएको छ । महाधिबेशन हुन नसकेको वर्षौं बितिसकेको छ । कुनै पनि बेला विष्फोट हुनसक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । देउवा समुहभित्र पनि उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का तीनतिर देखिएका छन् । यी तीन जनालाई एक आपसमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा उतारेर देउवा शक्तिशाली बनेका छन् ।
तर, यी तीन जनालाई एकै ठाउँमा उभ्याउने भित्री कोसिस कुनै शक्ति केन्द्रबाट भइरहेको आभास पाएपछि देउवा थप शशंकित बनेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । यी तीन जना एकै ठाउँमा उभिएर विकल्प तयार गरे भने देउवा आफ्नै गुटभित्र संकटमा पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
सिरहाको हिरासतबाट भागेका तीन पक्राउ
मन्त्री खतिवडा सनसिटी अपार्टमेन्ट नगएको स्पष्टोक्ति
डा खतिवडाका प्रेस संयोजक यमप्रसाद पौडेलले भने 'मन्त्रीज्यू आफैँमा मुटुको बिरामी...
महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले नवलपरासीका...
मकै पोलेर जीवन धान्दै
एकातिर घामको ताप, अर्कोतिर आगोको राप । छैसठ्ठी वर्षीया जसमती रोकाको शरीर पसिनाले...